Lahatsoratra nataon'i Ashwini Dave ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ashwini Dave
Miaraka amin'ny fisian'ny laharana asa aman-draharaha, tsikera an-tserasera ary haino aman-jery sosialy, ny ezaka fanampiana ny mpanjifan'ny orinasanao dia tafiditra ankehitriny amin'ny lazan'ny marika sy ny traikefan'ny mpanjifa an-tserasera. Mazava ho azy fa tsy maninona ny ezaka lehibe ataon'ny varotrao raha tsy ampy ny fanohanananao sy ny traikefanao. Ny marika ho an'ny orinasa dia toy ny lazan'ny olona iray. Mahazo laza ianao amin'ny fiezahanao hanao zavatra sarotra tsara. Jeff Bezos ve ny mpanjifanao sy ny anao